Qaxootigii ugu badnaa oo Syrian ah oo Galay Croatia – Radio Daljir
Seteembar 17, 2015 5:44 b 0
Khamiis, September 17, 2015 (Daljir) — Kudhowaad 4,000 oo qaxooti Siiraan Magangelyo doon ah ayaa mudo 24 saacadood gudohood ah galay wadanka Croatia, kuwaasi oo kasoo gudbey xuduudka Serbia kadib markii ay xukuumadda Hungay xidhay xuduudeheeda dalalka Yurub.
Televesion-ka wadanka Croatia ayaa baahiyey tirobadan oo Muhaajiriin magangelyo doon ah oo maalinimadii Khamiistii ahayd ee shalay galay wadankaasi oo noqday wadada kaliya ee ay xilligaan dadka kasoo cararaya Siiriya uga gudbaan Yurubta Galbeed.
800 oo kamid ah muhaajiriintaan oo kasoo raacay Tareen tuulada Tovarnik oo u dhow xuduudka Croatia ee Serbia ayaa gaarey magaalada Dugo Selo oo kudhow caasimadda Croatia ee Zagreb maalinimadii khamiistii ee lasoo dhaafay.
Saraakiil katirsan xukuumadda Croatia ayaa dadka magangelyo doonka ah ugudbiyey xarun kumeel gaar ah oo kudhow Jazevo, waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi uu sheegay in wadankiisu uu diyaar u yahay martigelinta qaar kamid ah qaxootiga laakiin aysan tiro badan xamili karin.
“Waxaan Diyaar unahay inaan qaabilno kumanaan kamid ah dadka muhaajiriinta ah, laakiin masiihayn karno dhammaantood, sababtoo ah ma siihaynkarno tobanaan kun oo kamid ah, Maxayeelay uma hayno dhaqaale aan ku hayno”. Ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Croatia Vesna Pusic.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Khamis_17